HomeTURKEYGobolka Waqooyi Bari44 MalatyaHawlaha Isbeddelka Isbeddelka ayaa ka bilaabmay Altınkayı Boulevard
09 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 44 Malatya, Gobolka Waqooyi Bari, GUUD, WADADA, TURKEY 0
Altinkayisi boulevard daraasadaha is-beddelka is-weydaarsiga ayaa bilaabmay
Dowlada Hoose ee Magaaladu Malatya waxay ku hawlantahay isbadal, isbadal iyo dib u cusbooneysiin howlo ku saabsan Dahabka "Abricot Boulevard", oo ah boulevard ugu weyn Malatya, kaasoo isku xira Tecde iyo Isgoyska Maşti.
3.3 kilomitir oo dherer ah, ballac mitir 50 ah oo ah Xariga Dahabka Dahabka ah ka hor inta aan la gaarin qaybta xNUMX kilomitir oo loo sii galayo meel ku habboon Magaalada Magaalo-weyn, qeybta harsan ee kiloomitir 1.1 ayaa bilaabey howlo hakinta.
Duqa Magaalada Selahattin Gürkan, Abaalmarinta khudaarta dahabiga ah iyo indha indheynta, wuxuu sameeyay bayaan ku saabsan shaqada la qaban doono. Kuxigeenka Xoghayaha Guud Latif Okyay iyo qaar ka mid ah madaxda waaxyaha iyo maareeyayaasha waaxda ayaa booqashada ku wehelisay.
Mehmet Mert, Madaxa Dhismaha Wadooyinka iyo Isuduwidda Kaabayaasha Wadooyinka, wuxuu cadeeyay inay bilaabeen inay ka shaqeeyaan Wadada Dahabiga ah ee loo yaqaan 'Golden Apricot Boulevard' oo kamid ah wadooyinka inta badan loo adeegsado Malatya marka laga hadlayo wareejinta gawaarida ilaa maalintii la furay. Waxaan hadda sameynay taxane PMT kahor asphalt. 2.2 wuxuu furi doonaa jidkeenna taraafikada inta lagu jiro maalinta. ”
Gürkan: Dhismahayagu wuxuu yeelan doonaa muuqaal aad u qurux badan ka dib muuqaalka muuqaalka
Duqa magaalada Selahattin Gürkan wuxuu sharraxay inay bilaabeen inay ka shaqeeyaan samaynta khudaarta dahabka ah ee loo yaqaan '' Apricot Boulevard 'oo ku habboon Malatya wuxuuna yidhi, ık Waxaan qorshaynay jidadkeenna boulevard sida bixitaanka 3 iyo imaatinka 3. Sida ugu dhakhsaha badan maalmaha 15, waxaan halkan ku dhammayn doonnaa shaqooyinka loo yaqaan "asphalt". Waxaan si xasaasi ah u nahay bilowga shaqada iyo waqtiga dhameystirka. Maaddaama aannaan dooneynin in muwaadiniinteenna ay si xun u saameeyaan daraasadahaan, waxaan u nugleeynaa arrintan Lug-lugaynta, laydhka, muuqaalka dhirta, shaqo dhexdhexaadka ah ayaa dhowaan la bilaabi doonaa. Waxaan ka shaqeyneynaa abuurida geedo aan biyo badan ugu baahneyn dhex-dhexaadkayaga. Dhismahayagu wuxuu lahaan doonaa muuqaal aad u qurux badan oo leh muuqaalka muuqaalka.
Marka dhammaan wadooyinka ka shaqeeya gobolkan ay dhamaadaan, muwaadiniinteenu aad bey u degi doonaan
Isagoo carabka ku adkeeyay in khudaarta Dahabka ah lagu xiri doono Saray Bosna Street laguna xiri doono Fahri Kayahan Boulevard, Duqa Magaalada Gürkan ayaa yiri, “Boulevard-kayagu wuxuu ku xiraa Mıhlıdut Street. Si aan uga dhigno qulqulka socodka taraafikada, waxaan ku sameynay isgoys qurux badan isgoyska Altınkayı-Güngör-Mıhlıdut. Xariiqda ugu weyn ee gobolkan waa Sinaanta Dahabka, marka aan ku xirno Saray Bosna Street oo aan u furney dhanka galbeed, waxaan ku haysan doonaa wado cusub jihada bari-galbeed. Tani waxay fududeyn doontaa isu socodka magaalada oo dhinaca galbeed ee wadada giraanta. Boulevard-kayagu sidoo kale waa mid ka mid ah isku xirka ugu weyn ee wadada South Belt. Marka dhammaan waddooyinka ka shaqeeya gobolkaan la dhammeeyo, muwaadiniinteennu aad bay u xasilloonaan doonaan ”.
Isbedelka 'Altiparmak' ee 'railroad' 06 / 11 / 2012 Duqa magaalada Bursa Altepe, T1 oo baaritaan ku sameeynaya Subparmak baaritaanka, shaqada ayaa la dhammeyn doonaa maalinta 20 ka dib wajiga Altiparmak uu si buuxda u bedelayo, ayuu yiri. Khadadka tareenka, oo billaabay muddadan, ayaa xarumaha tareenku ku xirnaan doonaan dhammaan degmooyinka oo ku nuuxnuuxsanaya in duqa magaalada Metropolitan Recep Altepe, oo ah midka ugu muhiimsan codsiyada T-1 ee waqtiga ugu gaaban si loo dhamaystiro wajiga lixaad ee jawiga, ayaa sheegay in ay ku bixiyeen shaqooyin culus. T-1 line Stadium Stadium, Arbacada Arbacada iyo Darmstad Street kadib markii uu bilowday marxuumka ayaa xusuusiyay in shaqada bilaabatay Altepe, 60'lık boqolkiiba waddada la dhigay jidadka, ayuu yiri. Duqa magaalada Boorama, oo bilowday todobaad ka hor ...
Isbedelka 'Altiparmak' ee 'railroad' 06 / 11 / 2012 Duqa magaalada Bursa Altepe, T1 oo baaritaan ku sameeynaya Subparmak baaritaanka, shaqada ayaa la dhammeyn doonaa maalinta 20 ka dib wajiga Altiparmak uu si buuxda u bedelayo, ayuu yiri. Khadadka tareenka, oo billaabay muddadan, ayaa xarumaha tareenku ku xirnaan doonaan dhammaan degmooyinka oo ku nuuxnuuxsanaya in duqa magaalada Metropolitan Recep Altepe, oo ah midka ugu muhiimsan codsiyada T-1 ee waqtiga ugu gaaban si loo dhamaystiro wajiga lixaad ee jawiga, ayaa sheegay in ay ku bixiyeen shaqooyin culus. T-1 line Stadium Stadium, Arbacada Arbacada iyo Darmstad Street kadib markii uu bilowday marxuumka ayaa xusuusiyay in shaqada bilaabatay Altepe, 60'lık boqolkiiba waddada la dhigay jidadka, ayuu yiri. Duqa magaalada Altepe, "Hal todobaad ...
Ogeysiiska Qandaraaska: KAYAŞ-IRMAK-KIRIKKALE - Qalabka korontada ee KETA 16 / 04 / 2012 Kayaş - River - KIRIKKALE - hubisay electrification sameeyey TC Tareennada State Agaasinka Guud (TCDD) Kayaş - River - Kırıkkale - Cetinkaya dhismeedka electrification shaqada dhismaha 4734 No. waxaa lagu Abaal marin by nidaamka furan by 19 qodobka sharciga soo iibsiga dowladeed. Macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan gundhigga hoos ku qoran. Number Diiwaangelinta dhaylo ah: 2012 / 37411 1-Maamulka a) Cinwaanka: TALATPAŞA BULVARI NO: 3 06330 gar ALTINDAĞ-ANKARA b) Telephone iyo lambarka fax: 3123090515-239, 4139, 4409 - 3123115305 c) E-Mail Address: wax @ TCDD. gov.t waa saddex) gundhigga lagu arki karaa cinwaanka internetka: https: //ekap.kik.gov.tr/ekap / ...
Hubisay-Edirne wajiga dayrta ee LINE-HORASAN Köprüköy XARUMAHAHA KM.1223 + + 0000 1225-500 DHEXEEYA HAGAAJINTA KAABAYAASHA curdan SHAQADA 03 / 08 / 2012 Xaraashi mas'uulka ah: İsmail Karahan Manager Auction Phone: Maareeyaha Auction 346221 70 00 / 4171 Fax: 346 221 32 54 Cilaan Date: 23.07.2012 00: 00: 00 Auction Date: 14.08.2012 00: 00: 00-10: 30 Qiimaha faahfaahinta: 100,00-TL Habka curdan: shaqeeyaa Subject curdan: Dhismaha daabacaan Diiwaangelinta No: 2012 / 90098 Mail: tcddsivasyolmd@hotmail.co HAGAAJINTA KAABAYAASHA OGEYSIIS IIBSIGA GANACSI JAMHUURIYADDA GUUD Agaasinka xadiidka dawladda (TCDD) 4. REGION Road Agaasinka hubisay-Edirne LINE The wajiga dayrta Köprüköy-HORASAN XARUMAHAHA KM.1223 + 0000-1225 + 500 DHEXEEYA HAGAAJINTA KAABAYAASHA shaqada dhismaha 4734 No. waxaa lagu Abaal marin by nidaamka furan by 19 qodobka sharciga soo iibsiga dowladeed. Macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan gundhigga hoos ku qoran. Number Diiwaangelinta dhaylo ah: 2012 / 90098 1-Maamulka a) Cinwaanka: Muhsin Yazicioglu BULVARI NO: 2 SÝVAS ...
Udem Hak-Sen Zonguldak Gobolka Sener Yalcinkaya 26 / 05 / 2018 Gaadiidka iyo Midowga Railway Workers '(Ude waxaan Hak-Sen) Madaxweynaha Zonguldak, adeeg fiican iyo Sarkaalka Movement guusha ayaa loo xil saaray in ay Sener Yalcinkaya. Ude waxaan Hak-Sen, taageerayaasha urur ama xisbi siyaasadeed ee ma dhalaalin ama amarada olmayacaktır ee Ururada Mecucut lagag xisaabtanka joogi off mawduuca, oo inta badan maxaa yeelay, waxay yihiin hawlaha la siyaasadeeyay oo tusay dhererka in haad oo kala duwan ayaa la Laakiin Ude waxaan Hakan waxaad u socota si ay had iyo jeer qaado shaqaalaha iyo xal u hesho dhibaatooyinka ay ka heli. Yalcinkaya Sen Zonguldak walaalkeen, Madaxweynaha our la our Head Regional kale ee Trade Unions madaxweynaha mar dambe ma yeelan doonaan wax shaki ah in shuruudaha. Zonguldak Madaxweynaha Turkiga iyo Z
Isbedelka 'Altiparmak' ee 'railroad'
Hubisay-Edirne wajiga dayrta ee LINE-HORASAN Köprüköy XARUMAHAHA KM.1223 + + 0000 1225-500 DHEXEEYA HAGAAJINTA KAABAYAASHA curdan SHAQADA
Saxiixay waddada Dubrovnik
Ahmet Emin Yilmaz: Boosaaso, taraamku wuu baxay, isbadalku wuu bilaabmayaa
Süleyman Yıldız: Hannaanka Isbedelka ee TCDD